Nuxurka Khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo madaxweyne Biixi ka hor jeediyey Goleyaasha Baarlamaanka | Somaliland Post
Nuxurka Khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo madaxweyne Biixi ka hor jeediyey Goleyaasha Baarlamaanka
Last Updated on … March 24, 2019 | Published by: SLpost
Hargeysa (SLpost)- Madaxweynaha Somaliland Md Muuse Biixi Cabdi, ayaa maanta khudbad-sannadeedka dastuuriga ah ka jeediyey labada Aqal Baaralamaan ee Wakiillada iyo Guurtida oo fadhi wada-jir ah yeeshay.
Fadhiga Baarlamaanta oo ku qabsoomay Xarunta Golaha Guurtida, waxa uu madaxweyne Muuse Biixi oo ay weheliyaan xubno ka tirsan Golaha Wasiiradiisa ku gaadheen Socod lug ah iyagoo ka soo kicitimay Xarunta madaxtooyada oo masaafo ku dhow 50mitir u jirta Xarunta Baaralaanka.
Madaxweyne Biixi waxa uu halkaas ka jeediyey khudbad xambaarsan Waxqabadka xukuumaddiisu ku tallaabsatay muddadii ay talada dalka haysay xukuumadiisu.
Khudbadda ayaa taabanaysay horumarka xukuumaddiisu ka samaysay dhinacyada adeegyada bulshada, nabadgelyada, siyaasadda Arrimaha Dibadda, koboca dhaqaalaha iyo Arrimo kale.
Khudbadda madaxweynaha ayaa u dhignayd sidan:-
“Maanta oo ay Xukuumaddu xilka haysay sannad, saddex bilood iyo maalmo, waxaan ku faraxsanahay in aan idinla wadaago xaaladda guud ee dalka, wixii innoo qabsoomay, iyada oo halbeegeenu yahay qorshaha Horumarinta Qaranka (NDP II) iyo Barnaamijkii Xisbigu ku galay tartanka doorashada. Waxa kale oo aynu isla eegi doonaa hawlaha inna horyaalla ee mustaqbalka dhaw iyo ka dheerba ah.
– Sidoo kale, waxa la kordhiyey35% daryeelka iyo dhaqaalaha bahda Garsoorka, si kor loogu soo qaado haybadda iyo maamuuska ay mudan yihiin bahda Garsoorku.
– Waxa dib loo qaabeeyey nidaamka iyo daah-furnaanta tartanka qandaraasyada dawladdu bixiso. Ilaa hadda waxa ay dawladdu bixisay 135 qandaraas oo dhammaantood loogu tartamay si daahfuran. Tartamayaashii qandaraasyadu waxay ka marag kaceen xilkasnimada, dhexdhexaadnimada iyo hufnaanta shaqada XubnahaGuddida Qandaraasyada Qaranka.
– Waxaannu hirgelinaySiyaasadda ah ‘Arday Kastaa ha helo Buugaagta Manhajka waxbarashada.’ Waxaana la qaybiyey 1,200,000 oo buug oo la gaadhsiiyey ardayda gobollada oo tiradoodu dhantahay 154,000 arday.
Waxa la dhisay 4 kaydbiyood oo yar yar, haddana waxa la bilaabay 4 kayd biyood oo waaweyn iyonidaamkii biyo galinta magaalada oo la dhigi doono magaalada gudaheeda qasabado dhererkoodu gaadhayaan 162 KM.
Waxa kale oo la dhisi doonaa ama dayactir lagu sameyn doonaa 503 Kaalmoodoo ay biyaha ka dhaansan doonaan xaafadaha dan-yarta ee Hargeysa.
– Waxa la abuuray Barnaamijka Shaqo-abuurka dhallinyarada ee Shaqo Qaran. Waa barnaamij shaqo u abuuraya 1,500 oo dhallinyaro ah oo ka soo gala jeeda dhammaan gobollada dalka. Dhallinyaradaas waxa ka mid ah500 oo hablood. Waa barnaamij ujeeddadiisu tahay is-dhex-galka dhallinyarada, dhismaha waddan-jacaylka, akhlaaqiyaadka wanaagsan ee shaqada iyo difaaca madaniga ah ee dalka.
– Waxa kale oo dhallinyarada fursad loo siiyay iyaga oo gobolkooda jooga in ay si xor ah ugu tartamaan 300 oo shaqo oo cusub oo ay Dawladdu baahisay,90 ka mid ah dhallinyaradaa shaqada heshay waa hablo.
Waxa loo qaybiyey qaboojiyayaaloo waaweyn Magaalooyinka Maydh, Laas-qoray, Bulla-xaar, Berbera, Saylac iyo Burco. Arrintani waxay wax ka tartay wax soo saarka iyo dabashada kalluunka. Sidaa awgeed, xaddiga kalluunkii la soo dabtay sannadkii tagay wuxuu kor ugu kacay 2,000 tan.
Waxa la bixiyey qandaraaskii shirkaddii dhisi lahayd Dekedda, waxaanna la bilaabay dhismihiiballaadhinta iyo casriyenta Dekedda weyn ee Berbera.
Waxa bilaabmay dhismaha jidka hal-bowlaha u ah ganacsiga innaga dhexeeya dalalka aynu jaarka nahay, gaar ahaan Ethiopia ee Berbera Corridor. Waxa mudnaanta la siiyey dhismayaasha biriishyada, waxaana la dhagax-dhigaybiriishkii ugu horreeyey oo ahDacar-budhuq. Dhismaha jidkaasi waxa uu qaadan doonaa muddo laba sanno ah. Waa jid weyn oo aannu hiigsanayno in uu kaalin muhiim ah ka qaato is-dhex-galka dhaqaale iyo bulsho ee Gobolka Geeska Afrika.
Waxa dayactir lagu sameeyey80 KM oo ka mid ah waddooyinka isku xidha Hargeysa iyo Burco, Hargeysa iyo Kala-baydh, Laascaanood iyo Tukaraq;
Waxa dib loo dayac-tiray Biriishyada kala ah Xamaas, Geel-lookor iyo biriishka dooxa Cabaad–weyne.
– Xukuumaddu waxay raashin iyo biyo gaadhsiisay in ka badan245,000 qoys, una dhiganta1,200,000 oo qof oo abaaruhusaameeyeen.
– Xukuumadda oo kaashanaysa Beesha Caalamka, waxa ay sidoo kale gaadhsiisay gar-gaar 431,000 qoys, una dhiganta in ka badan2,000,000 oo qof. Gargaarkaas oo lacag ahaan u dhigma 20 milyan oo doollar.
– Sidaas darteed, waxaan ugu baaqayaa Qaranka Somaliland, Dawlad iyo shacabba in aynu isku tashanno, una gurmanno dadkeena dhibaatadu hayso.”